श्रीमानले परपु’रुष’सँगको स’म्बन्ध थाहा पाएपछि… – Rapti Khabar
2020, October 27, Tuesday
श्रीमानले परपु’रुष’सँगको स’म्बन्ध थाहा पाएपछि…
काठमाडौं, भदौ ३१ ‘हाम्रो गाउँको एउटा मान्छे ह’राएको छ, खो’जिदिनु पर्‍यो,’ एक साताअघि इलाका प्र’हरी कार्यालय गैंडाकोटमा पुगेर दुई व्यक्तिले भने।
नवलपरासी (पूर्व) गैंडाकोट नगरपालिका–१८, हुर्चिलका ४२ वर्षीय ध’न’बहादुर मगर हराएको उनीहरुको भनाइ थियो।
प्रहरीले सोध्यो, ‘तपाईंहरु को हो उहाँको?’
‘हामी गाउँले भाइ,’ उनीहरुले जवाफ दिए।
‘कति भयो हराएको?’
हराएको ६ महिनासम्म पनि खोजी गर्न न’आउनु आफैंमा रह’स्य’मय लाग्यो गैंडाकोटका प्रहरी इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापालाई।
‘सामान्यतयाः मान्छे ह’राएको केही दिनभित्रैमा ख’बर आइसक्छ। फेरि उनीहरुले ६ महिनादेखि हराएको भनेका व्यक्ति एक वर्षभन्दा पहिले नै ह’राएको प’त्ता ल’गायौं,’ थापाले भने।
ह’राएका भनिएका धनबहादुर मगरकी श्रीमती फूलमाया घरमै थिइन्। उनले डेढ वर्षसम्म कुनै मतलब नगरेको तर, गाउँलेले खोजी गरिदिनु पर्‍यो भन्दै आएपछि प्रह’रीले यो घट’नालाई शं’काको घेरामा राख्यो।
फेरि हरा’एको सूचना दिन आएकाहरुले फू’लमा’यासँग सल्लाह समेत गरेका थिएनन्। ध’नबहादुरलाई गाउँमा नदेखिएको एक वर्ष बढी भइसकेको थियो। फूलमा’याले श्रीमान् भारत गएको बताए’की थिइन्।
रोजगारीका लागि भारत जाने गाउँका युवा सिजन सकिनासाथ फर्किन्छन्। भारत नै गएका गाउँका सबै युवा फ’र्किइसकेका थिए।
यसपालि त कोरोनाका कारण झन् सबै फर्किए। तर ध’न’ब’हादुर फ’र्किएनन्। त्यसपछि गाउँलेको मनमा चि’सो प’स्यो र उनीहरु प्र’हरी कार्यालय पुगे।
प्रहरीले उनीहरुको कुरा सु’न्यो र ‘ठिक छ हामी बुझौं’ला,’ भनेर पठाइदियो। २९ गते ध’नबहा’दुरको घरमै पुग्यो प्र’हरी टोली। प्र’हरीले ध’नब’हादुरकी श्रीमती फूलमा’यालाई लिएर फर्कियो।
‘कार्यालय ल्याइसकेपछि उनलाई सो’धखोज ग’र्‍यौं,’ अ’नुस’न्धानमा संलग्न प्रहरीले भने, ‘उहाँले अर्का एक व्यक्तिसँग मिलेर ह’त्या गरेको स्वी’कार्नु’भयो।’
त्यसपछि दि’उँसो फेरि प्र’हरी गाउँमा पु’ग्यो र मे’खब’हादुर म’गरलाई पनि प’क्रा’उ गर्‍यो।
उनीहरुले नै ध’नबहा’दुरको श’व गा’डेको ठा’उँ प्र’हरीलाई देखाए। प्रहरीले उनीहरुलाई लि’एरै गयो र श’व गा’डेको ठाउँमा खन्दा कं’काल फे’ला पार्‍यो।
प’रपुरु’षसँ’गको स’म्बन्ध खु’लेपछि ‘ह’त्या
रोजगारीका लागि यूएई गएका ध’नब’हादुर डेढ’ वर्ष बसेर फर्किएका थिए। २०७५ सालको माघमा ध’नबहा’दुर फ’र्किएपछि श्री’म’तीसँ’ग उनको आर्थिक वि’षयमा वि’वाद भयो।
‘मैले कमाएर पठा’एको पै’सा के गरिस्?’ ध’नब’हादुर श्री’मतीलाई सो’ध्न थाले। ‘तैँ’ले चा’हिँ विदे’शमा क’माएको अ’रु पैसा के गरिस्?’ फू’लमायाले पनि ध’नब’हा’दुरलाई प्रश्न गरिन्।
यही वि’षयमा उनीहरुबीच क’लह च’र्कियो। घर फर्के’को केही दिनपछि ध’नब’हा’दुरले गा’उँकै अर्का व्यक्तिसँग फू’लमा’याको स’म्ब’न्ध रहेको पनि थाहा पाए।
गा’डिएको अ’वस्था’मा फे’ला परेको ध’नब’हादुरको कं’काल
ध’नबहादुर विदेश गएपछि ३८ वर्षीया फूलमाया मगर सोही ठाउँका ४० वर्षीय मे’खब’हादुर सु’नारी म’गरसँग न’जिकि’एकी थिइन्।
मे’खबहादुरसँग श्री’मतीको सम्ब’न्ध ध’नबहादुरले थाहा पाएपछि झ’गडा’ले उ’ग्र रुप लियो। ध’नबहा’दुरले दुवै जनालाई मा’र्ने बताए।
‘म’लाई र मे’खब’हादुर दु’वैलाई मा’र्छु भनेपछि हामीले नै मा’र्ने योजना ब’नायौं,’ फू’ल’मायाले प्र’हरीलाई ब’यान दिएकी छन्।
२०७६ असार २० गते राति उनीह’रुको यो’जना अनु’सार घरमै ध’नबहा’दुरको ह’त्या भयो। मा’र्तोलले सं’वेदन’शील अं’गमा हा’नेको र पछि डो’रीले घाँ’टी कसेर मा’रेको ब’यान उनीहरुले दिएका छन्।
त्यसै रात उनीहरुले ध’नबहा’दुरको ला’स डो’कोमा बो’केर सुन्दरी सामुदायिक वनमा पु’र्‍याई गा’डिदिए। फू’लमाया’का दु’ई छो’रीको वि’वाह भइसकेको थियो। घरमा उनी मात्रै थिइन्। सा’सुस’सुरा’सँ’ग छु’ट्टि’इसके’काले ध’नब’हादुर क’हाँ जा’न्थे, के गर्थे अ’रुलाई था’हा हुँ’दैनथ्यो।
ध’नबहादुरको ह’त्या’पछि फू’लमा’याले उनका क’पडा ल’गायत सबै सा’मान लु’काएकी थिइन्। जसले उ’नलाई ढाँ’ट्न स’हज भयो।
अ’र्कोतिर फू’लमाया र मे’खब’हादुरको स’म्बन्ध प’नि च’लिरहेकै थि’यो। तर २९ गते ए’क्का’सि घ’रमै प्र’हरी पु’ग्यो र उनी’हरु’लाई ह’तक’डी लगायो।
ध’नबहादुरको कं’काल जिल्ला अस्पताल चितवनमा प’रीक्षणका लागि पठाइएको छ। प’क्राउ परेका दुई ज’नावि’रुद्ध क’र्तव्य ज्या’न मु’द्दामा १० दिन ‘म्याद लिएर अ’नुस’न्धान सुरु गरिएको जि’ल्ला प्रहरी कार्यालय नवल’परासी (पूर्व) ले जनाएको छ।
गीता केसी ह’त्या प्रकरण: अस्पताल जान्छु भनेर भतिजसँग जंगलतिर गएपछी…
Posted on September 5, 2020 September 5, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ २०, ललितपुर । भैंसेपाटी बस्दै आएकी ३९ वर्षीया गीता केसीको ह’त्या अरोपमा भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । निर्मल शनिबार बिहान भैंसेपाटीस्थित घरबाट प’क्राउ परेका हुन् । प्रहरीको प्रारम्भिक अनु’सन्धानमा गीताको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरिएको हो । केसीको परिवारले उनी ह’राएको भन्दै तीन दिनअघि महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरमा उ’जुरी दिएको थियो । […]
Posted on August 21, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ ५, काठमाडौं । आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार अहिले प्रदेश १, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरूमा वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भने बिहानैदेखि घाम लाग्न थालेको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना […]
आजको राशिफल: कुन राशिका लागि आजको दिन शुभ ? हेर्नुस
Posted on October 26, 2020 Author Rapti Khabar
वि.सं.२०७७ साल कार्तिक १० गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर २६ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । शरद ऋतु । श्रीशाके १९४२ । आश्विन शुक्लपक्ष । तिथि–दशमी,१३ घडी ३१ पला,बिहान ११ बजेर १६ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र– धनिष्ठा,०४ घडी ३२ पला,बिहान ०८ बजेर ०० मिनेट उप्रान्त शतभिषा […]
भारतलाई चीनले दियो क’डा चेता’वनी
आन्दोलन गर्ने चे’तावनी दिने वायुसेवा सञ्चालक संघ किन विमान नचलाउने निर्णयमा पुग्यो ? भ
आज २०७७ कात्तिक ११ गते मंगलबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस
आज थपिएका कोरोना संक्रमित कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुस
खानपानमा ख्याल नपुग्दा टिकाको दिन अस्पतालमा…
यसरी मनाए कलाकारले दसैँ (फोटोफिचर)
जब दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए…